Uyilo oluqhelekileyo-iXuzhou QLT yorhwebo Co, ltd.
Ukwaleka kwe-UV Powder kunye nokuSongwa kweMizobo
Yenza ingxelo ngelixa ukhusela imixholo kwimitha eyingozi ye-UVA kunye ne-UVB. I-QLT ibonelela ngesisombululo sokuhombisa esifikelelekayo esinokunceda uphawu lwakho lubonakale kwaye lubhenele kubathengi abahlukeneyo. Ukwenza ushicilelo olulinganiselweyo lwewayini? Sinezona zinto zincinci ezisezantsi kunye nexabiso elifikelelekayo kakhulu kwiinkonzo zethu zokuhombisa. Nxibelelana neqela lethu lokuthengisa ukuze uxoxe ngeemfuno zakho ezizodwa. CofaApha ukubona imizekelo yeebhotile zethu ezigqityiweyo.
Ukudityaniswa kwethanga, ukugqitywa kwentsimbi, Ukunqaba kunye nokuHamba
Uninzi lwethu lokugqiba umphezulu wokuhombisa lunokudityaniswa ukuhambisa ibhotile enefuthe lokubonwa eliphezulu. Ngaba ujonge umbala othile okanye uyilo oluthetha ngokwenyani kuhlobo lwakho? Nxibelelana nesebe lethu loyilo kwaye siya kusebenza nawe ukufezekisa umbono wakho. Cofa Apha ukubona imizekelo yeebhotile zethu ezigqityiweyo.
Ukubethelwa kwesiko kunye nokulahlwa kwempahla
Uvavanyo lweSilk kunye nokuNyathela okushushu
I-QLT igxile kuyilo lwesiko lokuyila. Siza kuthatha ilogo yakho kwaye senze isiko sokubhala okanye ukuloba okungafunekiyo ngokukodwa kuwe! Bonisa abathengi bakho abathembekileyo kwaye wenze uphawu lwakho kwiglasi. Thetha kwisebe lethu lobunjineli malunga neemfuno zakho ngqo.